XOG: Turkiga oo Somalia siinaya dayuurado dagaal oo casri ah + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka XOG: Turkiga oo Somalia siinaya dayuurado dagaal oo casri ah + Sawirro
XOG: Turkiga oo Somalia siinaya dayuurado dagaal oo casri ah + Sawirro
(Ankara) 15 Okt 2019 – Dowladda Turkiga ayaa ugu deeqi doonta 18 diyaaradood oo militari dowladda Soomaaliya, sida ay tibaaxayaan warar aan si dhab ah weli loo xaqiijin karin oo kasoo baxaya ilo kala geddisan.
Diyaaraduhu waxay ka koobnaan doonaan 7 diyaaradood oo ah nooca dagaalka T50Tx, dayuuradaha dagaalka ee ugu dhimashada badan, 3 Nooca gaadiidka militari oo ah, Airbus iyo 8 helikobtarro oo leh awood ay ku qaadaan gantaalaha riddada dheer.
Turkiga wuxuu kaloo deymin doonaa 5 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ah kuwii ugu dambeeyay oo gaaraya 2 bilyan oo Doolar oo la bixin doono marka ay Soomaalidu degto ama ay nabad noqoto,
Ciidamada badda ee loo tababaray somalia ayaa loo dhammeystiray tababarkooda ayaa sugaya howlgalkooda oo ay ka harsantahay wax kooban
Saaxiibada Soomaaliya sida Ereteriya waxay horey u bartilmaameedsadeen ciidamada badda gaarka ah ee loo tababaray la-tacaalista burcad-badeedda iyo gardarada kale ee ka dhaca biyaha Soomaaliya.
Iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga 2016
Waxaan dhisnay safaaradda ugu weyn Turkiga ee Muqdisho. Waxaan sidoo kale dhisnay Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi baarista ee Muqdisho, oo ka mid ah cusbitaalada ugu waaweyn Bariga Afrika.
Isbitaal haween iyo dhalasho oo leh awood 100 sariirood ayaa dhawaan furi doonta… Waxaan siinaa deeq waxbarasho wax kabadan 1000 arday oo Soomaali ah. Waxaan taageersanahay hannaanka dib-u-dhisidda ee Soomaaliya, ”ayuu yiri Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan furitaankii Madasha Iskaashiga Heerka 6-aad ee Turkiga oo ka dhacay Magaalada Istanbul bishii Febraayo 23-keedii.
Intii lagu guda jiray shirkii ganacsiga dhammaadkii Febraayo 22, heshiis iskaashi dhaqaale iyo ganacsi ayaa sidoo kale lagu kala saxeexday Turkiga iyo Soomaaliya.
Maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya wuxuu gaadhay ilaa $ 100 milyan. Tiradan waa in la aqbalaa bilow ahaan, ”Raiisal wasaare ku xigeenka Turkiga Lütfi Elvan ayaa ka sheegay madasha ganacsiga ay qabteen Gudiga Xiriirka Dhaqaalaha Dibadda ee Turkiga (DEİK) oo ka dhacay Istanbul 22-kii Febraayo.
Isagoo ka duulaya awooda weyn ee dalka marka loo eego tamarta iyo gaadiidka, Raiisel wasaarihii hore, Cumar C / rashiid Cali Sharmarke wuxuu sheegay in duulimaadyada tooska ah ee duulimaadyada tooska ah ee Turkish Airlines ay ku tagayaan Muqdisho ay u sameeyeen marin muhiim u ah maalgashadayaasha.
Mugga ganacsiga ee Turkiga uu la leeyahay dalalka Afrika wuxuu sare u kacay $ 19.4 bilyan sanadkii 2015, oo ka ahaa $ 4 bilyan sanadkii 2000, madaxweynaha DEİK Ömer Cihad Vardan ayaa ka sheegay madasha.
Waxaan diyaar u nahay inaan siinno nooc kasta oo taageero ah si aan u hubinno in kheyraadka Soomaaliya loo isticmaalo dhaqaalaheeda, ”ayuu raaciyay.
Turkigu wuxuu sameeyay qiyaastii $ 71 milyan oo loo dhoofiyo Soomaaliya sanadkii 2015, sida lagu sheegay xog rasmi ah.
Warbixintaan waa qortay: Kooxda NePlus Team
Previous articleShacabka oo ka cabanaya arrin lagu tilmaamay ”dhaqaale burburin” oo uu sameeyo maamulka Puntland
Next articleXulka Talyaaniga oo jebiyay rikoodh ay dhigeen 1938-kii + Sawirro